बाह्रसय छोराछोरी हुर्काउँदै एसओएसका आमा ! « Khasokhas Follow @khasokhasmag
बाह्रसय छोराछोरी हुर्काउँदै एसओएसका आमा !
प्रकाशित मिति : बैशाख १३, २०७४ बुधबार
आफ्ना छोराछोरी हुर्काउन धौधौ मान्ने वर्तमान नेपाली समाजमा ५२ वर्षीया अविवाहिता गोमा गुरुङले आठ जना छोराछोरी हुर्काइरहनुभएको छ । उहाँले उनीहरुलाई माया र कर्म दिइराख्नुभएको छ ।
अविवाहित गुरुङजस्तै लक्ष्मी लिम्बू पनि त्यस्तै आमा हुन् जसले आफू बिहे नै नगरी यतिखेर नौ छोराछोरीको आमा बनेर उनीहरुलाई हुर्काइरहनुभएको छ । गोमा र लक्ष्मीजस्तै अर्की आमा लक्ष्मी घिमिरेको कथा भने अलि फरक छ । बिहेको अर्थ नै नबुझ्ने १३ वर्षे केटाकेटी उमेरमा उहाँको विवाह भयो । बिहे गरेको एक वर्षमै उहाँले श्रीमान् गुमाउनुभयो । उहाँ अहिले आठ छोराछोरीको आमा बन्नुभएको छ । यसअघि घिमिरेले १७ जना छोराछोरीलाई हुर्काइ, बढाइ र पढाइसक्नुभएको छ ।
यस्तै सीता गिरी आफ्नै कोखबाट जन्मेका दुई छोराछोरीको साथै आफ्नो नयाँ कर्मघरका नौ जना छोराछोरीको रेखदेख र स्याहारसुसार गरिरहनुभएको छ ।
यतिखेर एसओएस बालग्राम सानोठिमीका १६ वटा घरका १६ जना आमा र आठ जना काकी त्यहाँ आश्रित १६० छोराछोरी स्याहार्न खटिनुभएको छ । उहाँहरु जस्तै मुलुकभरिका १० वटा एसओएस बालग्रामका एक हजार २०० छोराछोरीलाई स्याहार्न, रेखदेख गर्दै उनीहरुलाई सवल र सक्षम बनाउन १२८ जना आमा तथा ७५ जना काकी अहोरात्र खटिइरहनुभएको छ ।
यसबाहेक बालग्रामबाट विद्यालय शिक्षा सकी डेरामा बसेर पढिरहेका अरु ६०० छोराछोरी पनि तिनै आमाको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेका छन् । कुशल आमाको जिम्मेवारी निर्वाह गरेबापत बालग्रामले उहाँहरुलाई विभिन्न सेवा सुविधा र पारिश्रमिक दिन्छ । ती आमाहरुले आफ्नो जीवनको उत्पादनशील उमेर र वैशालु समय तिनै छोराछोरीका लागि भनेर त्याग गर्दै आउनुभएको छ ।
प्राकृतिक प्रकोपलगायत विभिन्न कारणले आफूलाई जन्मदिने बाबुआमा गुमाएका तिनै साना केटाकेटीलाई आमाको माया दिएर स्याहारसुसार र रेखदेख गर्दै दिनरात नभनी आमाहरु खटिनुभएको छ । बालग्रामले विभिन्न जातजाति, धर्म, समुदाय, परिवार र रहनसहनबाट आएका १० जना केटाकेटीलाई एउटा घरमा सँगै राखेर उनीहरुको मनोविज्ञान समेत बुझ्दै हुर्काउँदै आएको छ ।
विगत ४२ वर्षदेखि यस्ता बालबालिकाको लागि काम गर्दै आएको विश्वव्यापी संस्था एसओएस बालग्रामले भक्तपुरको सानोठिमी, काठमाडौँको जोरपाटी, सुनसरीको इटहरी, कास्कीको छोरेपाटन, सुर्खेत, चितवन, लुम्बिनी, काभ्रे र कैलालीस्थित बालग्राममा आश्रित एक हजार २०० बालबालिकालाई तिनै आमाले रेखदेख गर्दै आउनुभएको छ ।